Hiran State - News: Xaalada Mogdisho TFGda, Shabaab iyo shirar is daba joog ah oo halkaasi ka socda.
Xaalada Mogdisho TFGda, Shabaab iyo shirar is daba joog ah oo halkaasi ka socda.
Mogdisho: (Hiranstate.com)-Magaalada Mogdisho ayaa noqotay magaalo ay maalmahani ka jireen shirar is daba joog ah kuwaasi oo iskugu jira kuwo siyaasada dalka lagu falanqeynayo iyo kuwo ay qabiilada somaliyeed qaarkood isku arkayaan. bal aanu dul mar guud ku sameyno.
Dowlada Federalka iyo halka ay wax u marayaan.
Waxaa si weyn u soo shaac baxayo qilaafka ka dhaxeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Somaliya kaasi oo ku saabsan xiliga ay kordhisteen golaha baarlamaanka ee mudada sedaxda sano ah. shir uu maanta ku qabtay magaalada Mogdishu oo uu dhigay gogosha wasiirka madaxtooyada TFGda ayaa waxaa ka soo qeyb galay waxgarad, xildhibaano iyo waliba aqoonyahano. shirkaasi ayuu wasiirka ku sheegay inuu ku casuumay oo kaliya beelaha Hawiye oo uu ka soo jeedo sida uu sheegay kedibna waxuu halkaasi ka soo jeediyey isagoo ku hadlayey magaca madaxweynah Somaliya in beesha Hawiye ay ka hor timaado go,aanka uu baarlamaanka Somaliya waqtiga ku kordhistay. kediba waa waxgaradkii iyo xildhibaanadii shirka ka soo qeyb galay ayaa yiri bal horta Salaadii ayaa la joogaye aanu tukano kedibna wax shirkii ku soo laabtay ma jirin sidaasi ayuuna qorshahii wasiirka madaxtooyada ku shaqeyn waayey oo uu ku fashilmay.
Marka laga soo tago qilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soamliya waxaa jiro qilaaf aan walito banaanka u soo bixin oo ka dhaxeeya R/wasaaraha Somaliya iyo madaxweynaha Somaliya kaasi oo ku qotoma arimaha sharciga iyo awooda madaxweynaha iyo R/wasaaraha kala xadideyso oo midkasta kan kale ku qabsado mararka qaarkood.
Madaxweynaha Somaliya oo ay xiliga madaxtinimadiisu ka harsan tahay dhawr bilood ayey dadka saadaaliya arimaha siyaasada leeyahiin waxaa macquul ah inuusan waqtigaasi gaarin marka aad u guur gasho ololaha xawaaraha ku socda oo isaga ka dhanka ah oo ay wadaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano u badan qabqablayashii dagalka Somaliya, kuwaasi oo si uusan uga hadlin mudada uu kordhistay baarlamaanka doonaya iney xukunka ka tuuraan.
Ururka Shabaab iyo dagaalada ay ka wadaan magaalada Mogdisho.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ay Shabaab aad ugu baahan tahay risaasta ka dhaca qorayga Baasuugaha oo uga imaan jiray dhinaca dowlada inkasta oo la soo sheegayo iney wadan dadaal ay dib ugu furayaan mid ka mid ah jidadka soo gala magaalada Mogdisho arintaasi oo ay iska kaashanayaan ganacsato ka tirsan ururka Shabaab oo arimaha hubka iyo kala iibintooda u qaabilsan Shabaab iyo saraakiil uu ka mid yahay Indhacade howshaasi oo ku dhaw gabo gabo waa hadii dib loo furo jidadkaasi.
Maxaa dhici kara hadii la furo jidadkaasi hada xiran ee gala suuqa Bakaaraha?
Hadii la furo waxaa dib u soo laabanayo Hoteladii sida sahlan loo qarxin jiray iyo waliba qaraxyadii jidka isku xira Madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha laga sameyn jiray. waxaa kale oo yaraanayana awooda ciidamda dowlada maadama hubkii ay ku dagaal gali lahayeen si sahlan looga iibsan karo kedibna ay kooxahaasi laba jibaaraan dagaalda ay ka wadaan Mogdisho.
Si kastaba TFGda sida muuqata wax badan oo awood ah kuma lahan siyaasadaha hada socda maadama ay shacabka Somaliyeed iyagu ka shirayaan danahooda iyagoo degaanadooda u sameysanaya maamul goboleedyo ugaar ah. sidoo kale masuuliyiinta dowalda ayaa ceebweyn kala kulmi doona warbixin laga yaabo iney dhawaantaan UNDP soo bandhigto taasi oo muujineysa sida ay hogaanka dalka ugu sareeya ugu takri faleen dhaqaalo loogu talo galay gobolada Somaliya in wax looga qabto sida caafimaadka, waxbarashada iyo waliba amaanka dadkaasi taasi oo sanadkasta lagu bixiyo malaayiin dolar.
Dhaqaalahaasi waxey dowlada u isticmaashaa qaab qaldan iyadoo halkii ay amaanka goboladaas iyo sidii ay nidaamka dowlada u gaarsiin laheyd ka fikiri laheyd ayey ku mashquuleen iney shacabkaasi kala irdheeyaan iyagoo markasta ku mir mirsiyooda in gobolo badan oo dalka ka jira aysan shacabkoodu mideysneyn. xitaa waxey awoodi karaan iney isku keenaan ma doonayaan iney isku keenaan hadiiba ay gobolada qaarkood ka jiro fikir kala duwanaan shacabka dhexdi ah. waxaa kale oo ay awoodaan iney mid ka mid ah ay si buuxda u dhahaan waxaanu la shaqeyneynaa maamul hebel hadba kii ay iyadu u aragto inuu macquul la yahay, taasina ma doonayaan iney sameeyaan waa marka laga hadlayo siyaasda TFGda ay kula dhaqmeyso qaar gobolada Somaliya shacabkooda ka mid ah ileen shacabka gobolada Somaliya oo kala danbeyn iyo tacliin hela waxaa ugu muhiimsan hantida ay jeebka gashanayaan qaarkoodna hogaanka ugu sareeya waxaa loogu yeeraa Shiikh iyo wax la mid ah.
· admin on March 22 2011 15:04:50 · 0 Comments · 1904 Reads ·
14,579,506 unique visits